TANANAN’I MAHANORO : Olona 22 narary nihinana antsantsa misy poizina
Loza roa, loza telo ny zava-nitranga ao amin’ny tanànan’i Mahanoro, amin’izao fotoana izao. Ny fihinanana antsantsa indray no nahitan-doza, taorian’ireo vono olona nisesisesy vokatry ny asan-jiolahy. 21 décembre 2016
Antsantsa lehibe iray izay azon’ny mpanarato notetitetehina ary namidy tao an-tsena no niteraka aretina ity. Tokantrano maro tao Mahanoro no indray nanjifa ity trondro lehibe ity.
Taorian’ny fihinana azy, izany hoe ny alin’ny alatsinainy hifoha ny talata 20 desambra ity dia nanomboka nihetsika ny aretina. Fanimpanina ary mandoa sy mivalana ary malemy avy hatrany no fisehon’ny aretina.
Ny marainan’ny talata 20 desambra ity dia tonga nitandahatra namonjy ny hôpitaly tao an-toerana ireto marary ireto. Hatramin’ny ora nanoratana ny lahatsoratra dia marary 22 no efa tonga nila fitsaboana maika, tao amin’ny hôpitaliben’i Mahanoro, izy ireo izay mbola tsy nisy ahiana ny ainy ary mbola ampy azy ireo ny fanafody namonjena azy ireo.
Raha ny fanazavana nomen’ny mpitsabo iray eto Toamasina dia ny fihinanan’ireo trondro ny “algue” amin’izao andro mafana izao no miteraka fanapoizinana amin’ny olombelona, ka tokony samy hitandrina ny rehetra amin’ny fihinanana ireo trondro lehibe an-dranomasina.